Ekwentị mkpanaaka Nledo ™ - Independent mobile spy spy site na ọkachamara Jeff Tinklet
M n'aka na onye obula na-eche nke ekwentị mkpanaaka inyocha software ịzụta?
Anyị Kwadebere Ndepụta - Ndị Nledo ekwentị 4 kacha mma
Ekwentị Nledo na-atụ aro FlexiSPY as Thunder ekwentị ekwentị Nledo na 2020! Ọ dị ike niile na otu usoro nyocha. The price mkpado bụ obere bit elu ma na aka nke ọzọ, o nwere ihe niile n'elu elu spy atụmatụ, ọ bụ a pụrụ ịdabere na, ndị ahịa nkwado mkpara dị ukwuu na kwa na mbipụta Oke, ị na-nyere na free paswọọdụ esi ngwa.
Ọzọkwa, ihe ọhụụ ọhụrụ ahụ bụ ọrụ ntinye dịpụrụ adịpụ nye ndị ahịa anyị.
Ugbu a ị nwere ike ide akwụkwọ nnọkọ dịpụrụ adịpụ na onye ọrụ aka nwere ahụmahụ, onye ga-eme ya mgbọrọgwụ / jailbreak ezubere iche ngwaọrụ mkpanaaka na tinye FlexiSPY n'ihi na ị.
Lelee nke m Nyochaa nyocha.
Bido YD N UGBU A -> Kacha mma Ngwọta FlexiSPY
mSpy na-adịbeghị anya emelitere ya software. Ugbu a ọ kacha mma ekwentị nledo na-adịghị achọ dịrị na ike soro iPhone enweghị wụnye ngwa na ekwentị mkpanaaka. Akwadoro dị ka enweghị Jailbreak Solution.
Lelee nke m MSPY Nyocha.
Bido YD N UGBU A -> NO JAILBREAK Ngwọta mSpy
3. Highster Mobile Nledo
Highster Mobile Spy bụ otu n'ime sọsọ kacha mma nledo ngwanrọ, n'ihi na ị na-enwetara ọtụtụ atụmatụ na ọnụ ala dị ala. E nwere ihe ọ bụla ọzọ spy ngwa na ahịa na-enye gị a dị ọnụ ala karịa ụzọ ka ndị nledo na onye na atụmatụ dị ka nke ahụ. Ọzọkwa, ọ bụ undetectable na nnọọ mfe iji wụnye. Uru ọzọ bụ na ikikere dị ogologo ndụ yabụ enweghị ndebanye aha kwa ọnwa!
N’AKORTK HK H AKW MKWỌ AKWOBKWỌ AKW MKWỌ AKW HADKWỌ, Ọ B WOR ỌR WOR Ọ BYLA.
Ugbu a, anyị nwere ike ikwu mSpy dị ka nke abụọ dị ọnụ ala, magburu onwe arụmọrụ, na oké mma ọzọ.
MGBE AH> -> Mara mma ọzọ mSpy
4. Spyera ekwentị
Spyera ekwentị bụ sọftụwia emere site na ịchịkọta ahụmịhe. Ha mgbe niile kwalite ha spy ngwa na taa ha nwere ezi spy software. N'aka nke ọzọ, ngwa a dị ntakịrị oke ọnụ maka ihe ị nwetara. Otú ọ dị, Spyera spy ngwa bụ nkwụsi ike na nyocha ndị ahịa na-adịkarị mma. Ya mere ọ bụrụ na ị bulie a spy software ị gaghị akwa ụta na ya. Ọzọkwa, rịba ama! Ekwentị nledo na-enye gị Spyera Discount Coupon ruo 30%.
Bido YD N UGBU A -> Spyera Ekwentị Ngwọta
Anyị kacha mma kacha mma zụta ekwentị inyocha software bụ…
The Kacha mma zụrụ inyocha software ga- mSpy, n'ihi ụgwọ ya yana ụlọ ọrụ nyocha. Ndị ọzọ nke a spy software ga-abụ Highster Mobile.
The TOP gosiri na ihe Ultimate Nledo Ngwọta ga- FlexiSPY nke doro anya na ọ bụ otu n’ime usoro nchọta kachasị elu na ahịa. Nke a spy software na-enye niile atụmatụ dị mkpa maka ọkachamara nledo na-enye gị technician, onye ga-akpata / jailbreak lekwasịrị ngwaọrụ mkpanaaka na wụnye FlexiSPY gị.
Gbasara m - ode akwụkwọ
Aha m bụ Jeff Tinklet na abụ m onye njikwa ọdịnaya na onye nnọchi anya ndị ahịa na ekwentị Nledo. Ihu ọma, m na-eduzi ụgbọ mmiri, na-ekpebi ozi ndị m ga-ekpuchi, na otu esi ekpuchi ha.
M tolitere na Wyoming, ọ bụ ezie na m bi na New York ugbu a, obi m dị na Highlands.
Ihe ndị ahịa anyị chere?
"Ndị nwoke niile bụ otu. Ndị aghụghọ na-aghọ aghụghọ. Na FlexiSPY achọpụtara m na ọ nwere otu nwanyị ma ụmụ nwanyị abụọ nwere mmekọrịta. You gaghị enwe ike iche ụdị ụjọ juru m anya. Worldwa m gweriri iberibe na ihe nke abụọ. Enweghị m ike ikwe ihe a ga-eme ọzọ. Site ugbu a gawa, m ga - eji sọftụwia a nledo ụmụ okorobịa m nwoke. Ha ekwesịghị ịtụkwasị ya obi.
"Azụrụ m Highster Mobile. Nnukwu ngwanrọ. N'ime ụbọchị 4 ekwenyesiri m obi abụọ m ike. Ọ na-egbu mgbu mana ọ ka mma ugbu a karịa mgbe afọ 10 gasịrị. Mụ na nwanyị ahụ mere m atụmatụ ọdịnihu m. Echekwara m etu ụmụ anyị ga-esi dị. Achọrọ m zụta nke a software na mbụ. Daalụ ekwentị nledo, Mark. "
"Ọ bụghị ihe ijuanya na akụkọ ya dị njọ, dị mkpụmkpụ na enweghị aka ọrụ. Ọ nọrọ ọtụtụ oge na-asọfụ web na iphone ya. Obi dị m ụtọ na m na-azụta ngwanrọ ekwentị ekwentị. Ana m achụpụ ya ozugbo. Mgbe m gosichara ya ihe akaebe na ọ kwenyere ịga na-akwụghị ụgwọ ụgwọ. M chebere. otutu ego na ngwanrọ a. "
Anyị na-anwale ekwentị spy ngwa na-enye gị free rewiews na nduzi.
Anyị malitere inyere ndị na-ege anyị ntị aka na 2012.
Ọ bụrụ n’ịchọta na ntuziaka anyị bara uru, biko nyere anyị aka ịnọ ndụ site na ịzụrụ ngwa site na njikọta mgbakwunye anyị.
FlexiSPY Nyocha & Ntinye 2022 - Pros, Cons & Verdict
mSpy Nyocha & Rating 2022 - Uru, ọghọm, Isi
Highster Mobile Nyocha & Rating 2022 - Uru, Cons & Mkpebi
Spyera nyocha 2022 - Nyocha ndị ahịa Spyera - Ọ na-arụ ọrụ?
Ultimate Win-Spy Review - Olee otú Remote Nyochaa PC Review!
© ekwentị mkpanaaka na | Mbido | Okwu nke Service | amụma nzuzo | Kpọtụrụ | Ulo ahia
Weebụsaịtị a na-eji kuki iji melite ahụmịhe gị. Nwere ike ịpụ apụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. I nwekwara ike igbochi kuki na ihe nchọgharị gị. Nke a bụ otu. Anyị bụ ndị ọkachamara nyochaa na ule website. Ọ bụrụ na ịzụta mgbe ịpịrị njikọ njikọ anyị anyị ga-enweta obere ọrụ, ọ ga - enyere anyị aka ịkwụ ụgwọ mmefu ụbọchị na-aga n'ihu na-enyere gị aka Kachasị mma anyị nwere ike, yabụ na ikpe ahụ, daalụ, Jeff!